यी राशी भएका युवतीलाई मिल्नेछन् बुद्धीमान पति ! खर्च गर्न कहिल्यै पनि हुँदैन् पैसाको कमी ! – Medianp
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २६, २०७५१७:४३0
एजेन्सी,२६ असोज । राशीले मानव जीवनमा थुप्रै किसिमको प्रभाव पार्ने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख छ । वैवाहिक सम्बन्धलाई सफल बनाउनको लागि राशी ग्रहहरु मिल्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले आज हामी कुन कुुन राशी भएका युवतीले धनि श्रीमान पाउँछन् भन्ने बारे बताउँन गइरहेका छौँ ।
मेष राशि : यो राशी भएका युवतीहरु निकै भाग्यमानी रहेको बताइएके छ । उनीहरुलाई धेरै माया गर्ने श्रीमान मिल्नेछ । उनीहरुको पतिले श्रीमतीले भनेको कुराहरु सबै मान्ने बताइएको छ ।
कन्या राशी : कन्या राशी हुने युवतीहरु निकै भाग्यशाली हुने छन् । उनीहरुलाई आफुले खोजेजस्तो पति मिल्ने देखिएको छ । आर्थिक रुपमा मात्र नभएर बौद्धिक रुपमा समेत राम्रो पति भेट्ने छन् । कन्या राशी भएका युवतीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध निकै राम्रो हुने देखिएको छ ।
धनु राशी : उक्त राशी हुने महिलाहरु आफै पनि धनि बन्ने छन् । यो राशी भएका युवतीहरुले सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठा भएको पति पाउनेछन् ।
मकर राशी : यो राशी भएका युवतीलाई अत्याधिक भाग्यशाली मानिएको छ । आफ्नो मेहनत र परिश्रममा विश्वास गर्ने भएकोले यो राशी हुने युवतीहरुले माया गर्ने असल श्रीमान पाउनेछन् । परिवारको माया र साथा पाउने हुँदा मकर राशी भएका युवतीहरुको बैबाहिक जीवन राम्रो हुने देखिएको छ ।
किन लगाउछन् यो परिवारका सबै सदस्य घरभित्र बस्दा पनि हेल्मेट ? यस्तो छ दर्दानक कहानी